यी हुन् कांग्रेस महाधिवेशनमा प्रदेश सभापतिका दर्हिला आकांक्षीहरु - Nepal Tale | - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
यी हुन् कांग्रेस महाधिवेशनमा प्रदेश सभापतिका दर्हिला आकांक्षीहरु
Published Date : २०७८ असार ३१, बिहीबार
काठमाडौं। कांग्रेस महाधिवेशनको सरगर्मि चौतर्फी बढिरहेका बेला प्रदेशस्तरका नेताहरुले पनि लबिङ सूरु गरेका छन् । पछिल्लो समय चर्किएको राजनैतिक गर्मिले कांग्रेस तल्लो तहको महाधिवेशन केहि समय सार्ने गरि कांग्रेसले निर्णय गरिसकेको छ । सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा देउवा नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिएका कारण पनि कांग्रेसको महाधिवेशन तोकिएको समयमा नै हुने सम्भावना कम छ । जे होस आसन्न कांग्रेस महाधिवेशनलाई लिएर कांग्रेस भित्र केन्द्रस्तर देखी वडा स्तरसम्म माहोल भने बनेर गएको छ । देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि नेपाली कांग्रेसले नितान्त नयाँ संगठन यसपटक देखि बनाउँदै छ। कांग्रेसको पार्टी संरचनामा प्रदेश समिति नयाँ हो। पार्टी संरचनामा थपिएको प्रदेश कार्यसमितिको मूल नेतृत्वमा पुग्न पार्टी भित्रका समूहले तयारी गरिरहेका छन्। जसमा देउवा पक्षको संस्थापन पक्ष र पौडेल पक्षको संस्थापन इतर पक्ष प्रमुख रहेका छन् ।
को को छन् कांग्रेस प्रदेश सभापतिका आकांक्षीहरु ?
सुदूरमा कांग्रेस महाधिवेशनको रौनक बढेसँगै सभपतिका आकांक्षीहरुको नाम अगाडी आएको छ । सुदूर देउवाको गृह प्रदेश पनि हो । देउवाको गृह जिल्ला र कांग्रेस नेताद्वय एन.पि साउद र रमेश लेखको भूमिका महत्वपूर्ण हुने सुदूरमा कांग्रेस देउवा पक्षनै बलियो देखिन्छ । कैलालीका जिल्ला सभापति नरनारायण शाह (मनु) प्रदेश सभापतिका आकांक्षी हुन्। देउवापक्षबाट उनी प्रत्यासी बन्ने लाइनमा छन्। डडेल्धुराका सभापति कर्णबहादुर मल्ल संस्थापनइतरबाट प्रदेश सभापतिमा उठ्ने सम्भावना छ। तुलनात्मक रुपमा उक्त प्रदेशमा संस्थापन इतर कमजोर रहेकाले उनी प्रदेश सभापतिमा उम्मेदवारी नदिएर केन्द्रीय सदस्यमा उठ्ने चर्चा पनि छ। जे होस तुलनात्मक हिसाबले हेर्दा शेरबहादुर देउवा पक्षको बर्चस्व रहेको सुदूरमा प्रदेश सभापति देउवा पक्षले लिने देखिन्छ ।
कर्णालीमा संस्थापन इतर पक्षबाट नेता हृदयराम थानी र युवा नेता भूपेन्द्रजंग शाही सभापतिला आकांक्षी हुन्। भने देउवा पक्षबाट कर्णालीमा प्रदेशका संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाहीको नाम चर्चामा छ । कर्णालीमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्ण बहादुर खड्काको राम्रो छाप छ तयसैले पनि पूर्ण बहादुर खड्को राम्रो लबिङ गर्ने नेताले सभापतिको टिकट पाउने पक्का पक्की हुने देखिन्छ ।
कर्णालीमा वरिष्ठ नेता पौडेलपक्षले सुर्खेतका केन्द्रीय नेता हृदयराम थानीलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ। प्रदेश सभापतिमा पौडेल पक्षका नेता भूपेन्द्रजंग शाहीले पनि दाबी गरेका छन्। शाही गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कालीकोटबाट उम्मेदवार थिए।शाही पिछडिएको क्षेत्रबाट केन्द्रमा सहमहामन्त्रीको दाबी गर्ने पक्षमा छन्।
लुम्बिनिमा रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको संस्थपन इतर पक्षले सभापतिको टुंगो लगाईसकेको छ । यसअघि इतर पक्षले बुटवलमा जिल्ला सभापतिको बैठक राखेर प्रदेशसभामा उठ्ने उमेरद्वारको टुंगो लगाईसकेको छ । बुटबलमा भेला भएर संस्थापनइतरका जिल्ला सभापतिहरुले रोल्पाका सभापति अमरसिंह पुनको नाममा सहमति गरेका छन्। संस्थापनपक्षबाट नवलपरासीका केन्द्रीय नेता देबेन्द्रराज कँडेल लुम्बिनी प्रदेश सभापति उठ्ने चर्चा छ। यद्दपी उनको उमेद्वारीको निश्चित भने भईसकेको छैन ।
केन्द्रीय दुई नेतामध्ये एकलाई प्रदेश सभापतिमा उठाउने संस्थापनपक्षको तयारी छ। केन्द्रीय सदस्यद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र गोविन्द भट्टराईको गण्डकी प्रदेश सभापतिमा चर्चा छ। गोरखाका पाण्डे र तनहुँका भट्टराईमध्ये एक जना सभापति देउवापक्षबाट गण्डकी प्रदेश सभापतिको प्रत्यासी बन्ने सम्भावना छ।संस्थापनइतरले कास्कीका ‘सिनियर’ नेता शुक्रराज शर्मा र तनहुँका नेता रघु पौडेलमध्ये एकजनालाई उठाउने सम्भावना रहेको छ। पौडेल गत निर्वाचनमा तनहुँको १ (ख) मा पराजित भएका थिए।
देशको राजधानि रहेको बाग्मती प्रदेशमा कांग्रेस संस्थापन पक्षबाट पूर्व मन्त्री मोहन बस्ने बलियो प्रतिस्पर्धी हुन् । संस्थापन देउवा पक्षबाट सभापतिका आकांक्षी बस्नेत मात्र होइनन् । यसका अलवा बाग्मतीमा प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ पनि सभापतीको होडमा रहेका छन् । देउवालाई समय समयमा साथ दिँदै आएका केन्द्रीय सदस्य भीमसेनदास प्रधान पनि प्रदेश सभापतिका आकांक्षी हुन्। सिटौला समूहमा रहेपनि प्रधान संस्थापनपक्षसँग कार्यगत एकता गर्दै आएका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट बागमती प्रदेश सभापति बन्ने आकांक्षी धेरै छन्। काभ्रे सभापति मधु आचार्य, नुवाकोट सभापति जगदिश्वर नरसिंह केसी, धादिङ सभापति रमेश धमला, धादिङकै नेता रामनाथ अधिकारी सभापतिको आकांक्षी हुन्। पौडेल पक्षबाट एक एकल उमेरद्वार उठाउन नसके सभापतिको होडमा पौडेल पक्ष कमजोर रहने देखिन्छ ।
प्रदेश २ कांग्रेसका वर्तमान उपसभापति विमलेन्द्र निधिको पकड क्षेत्र हो । पहिला संस्थापन पक्षलाई सघाउदै आएको प्रदेश २ मा यसअघिको महाधिवेशनसम्म संस्थापन देउवा पक्ष बलियो थियो । तर यसपटक भने केन्द्रबाट नै दुई खेमा बनेका संस्थापन र विमलेन्द्र पक्षका कारण प्रदेश २ मा निधिलाई चुनाव जित्न गार्हो छ । प्रदेश २ मा निधिले सभापतिका लागि धनुषाका रामसरोज यादवलाई अघि सार्न लागेका छन्। संसदीय दलका नेतासमेत रहेका उनी प्रदेश सरकारको मन्त्रीसमेत छन्। पौडेल पक्षबाट केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका रामकृष्ण यादव सभापतिको होडमा लाग्ने सम्भावना थियो । तर उनले केन्द्रमा सहमहामन्त्रीमा लड्ने मनस्थिति बनाएका छन्। उक्त समूहबाट पर्सा जिल्ला सभापति अजय द्विवेदीलाई अघि सार्ने सम्भावना बढी रहेको बताइएको छ।
प्रदेश १ मा संस्थापनपक्षले सभापतिमा मोरङका अमृत अर्याललाई उठाउने तयारी गरिएको छ। उनी मनोनित केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन्। केन्द्रीय सदस्यमा पराजित उनलाई देउवाले मनोनयन गरेका थिए।
संस्थापनइतरमा प्रदेश १ को सभापतिको उम्मेदवार चयन गर्न नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र डा शेखर कोइराला हाबी हुने भएका छन्। शेखरले प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालालाई प्रदेश सभापतिमा अघि सारेका छन्।
सुनसरीमा जिल्ला सभापतिको उनको कार्यकाल यसपटकदेखि सकिँदैछ। सिटौलाले झापाका सुधीरकुमार शिवाकोटीलाई प्रदेश सभापति बनाउन खोजेका छन्। प्रदेश १ को सभापतिको प्रत्यासी सिटौला र शेखरकै सहमतिले निर्धारण हुने देखिएको छ।
यसअघि पाँचथरका भिष्मराज आङ्दाम्वेको नाम पनि सभापतिमा आएता पनि उनले सहमहामन्त्रीमा आफ्नो दावी दिएका कारण उनि प्रदेश सभापति उठ्ने सम्भावना कम छ उनि देउवा निकट नेता मानिन्छन् ।